Tsy azo lavina, amin’ny maha-protestanta antsika, ny maha-zava-dehibe ny fampianarana Soratra Masina, ary fampianarana miainga amin’ny loharano madio mangalahala dia ny Baiboly izany. Ny mpanitsy fivavahana dia nametraka ho isan’ny foto-pinoana protestanta ny hoe “SOLA SCRIPTURA” na ny “SORATRA MASINA DIA NY SORATRA MASINA IRERY IHANY”. Noho izany ary, dia hisy fampianarana mitohy momba ny foto-kevitra ara-tSoratra Masina eto amin’ny Gazetintsika ary anombohana izany dia fanadihadiana mahakasika ny anjely.
Ao amin’ny Baiboly dia ahitana Teny betsaka momba ny “anjely” na ao amin’ny Testamenta taloha izany na ao amin’ny vaovao. Dia ho resahantsika misimisy kokoa hoe “Iza moa izy ireo” ary inona marina ny asany.
Ny teny ilazàna ny “anjely ao amin’ny Baiboly dia MALAK amin’ny teny hebreo ary AGGELOS (vakiana hoe “angelos” amin’ny teny grika). Ny hevitr’ireo teny ireo dia iray ihany: IRAKA. Ny anaran’ny boky MALAKIA araka izany dia IRAKO (Mon Messager)no heviny.
Ny famaritana feno ny atao hoe “anjely” dia mazava tsara ao amin’ny Hebreo 1:14 “Tsy fanahy manompo va izy rehetra nirahina ho an’izay handova famonjena?” Midika izany fa ny anjely dia fanahy aloha, zava-boahary tsy hita maso mamita Iraka na Messagers.
Misy karazana anjely nosokajiana araka ny anarany avy ao amin’ny Baiboly:
- Anjely: zava-boahary ara-panahy, izay manana saina sy fahendrena ambony. Na dia izany aza, mety hitan’ny mason’olombelona izy, raha ilaina izany amin’ny iraka ampanaovina azy. Ny anjejy dia fanahy nefa afaka maka ny endrik’olona izy. Betsaka ny ohatra azo raisina ao amin’ny Soratra Masina: Gen 19:1; Mpits 6:11; Jao 20:12; Asa 12:7. Misy aza anjely tonga mivahiny ao an-trano saingy tsy fantatra izany (Heb 13:2). Ny tenin’ny anjely dia mety ho haintsika olombelona noho ny asan’ny Fanahy Masina.
- Fiandrianana (Kol 1:16)
- Fanapahana (Ef 1:21; Kol 1:16)
- Fahefàna (Ef 1:21; Kol 1:16 I Pet 3:22)
- Ny Serafima (Isaia 6:2): ny heviny dia hoe “mirehitra, mivaivay”. Midera an’Andriamanitra sy ny fahatsaràny rehetra no asany. Ilain’Andriamanitra ihany koa izy ireo hanadio sy hamafa ny heloky ny olo-masina. Manana elatra enina izy ireo, ny roa manarona ny tavany, ny roa manarona ny tongony ary ny roa anidinany. Mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ireo (Is 6:1-8)
- Ny Kerobima izay resahina matetika ao amin’ny Soratra Masina (Gen 3 II Sam 22 Ez 10 Heb 9:5): manana tanana, tongotra ary elatra izy ireo. Mahavariana ny fitantaran’I Ezekiela azy ao amin’ny toko faha-10. Mitarehin’olona izy ireo, ary efatra ny tavany ary efatra ihany koa ny elany. Ny bokin’ny Genesisy dia mampiseho fa niambina ny zaridaina tao Edena ny Kerobima (Gen 3:24). Teo ambonin’ny fiaran’ny Fanekena koa izy, mariky ny hery sy ny fahamasinan’Andriamanitra (Eks 25: 17-21).
Ny bokin’ny Salamo ihany koa dia mamaritra ny toeran’izy ireo eo akaikin’Andriamanitra (Sal 18:10). Tafika iray amanontolo mihitsy arak’izany no manandratra ny voninahitr’Andriamanitra, sady mamita iraka ety ambonin’ny tany (Sal 103:20).
Voaporofo ihany koa, araka ny nofin’I Jakoba fa mampifandray ny lanitra sy ny tany, mivezivezy miakatra sy midina ny anjely (Gen 28:12).
- Arikanjely (I Tes 4 Joda 1:9)
Tsy misy afa-tsy iray ny Arikanjely izay manana fahefàna ambonin’ny rehetra. Ny tovona ARCH amin’ny teny grika dia “voalohany”, “ny lohany” no dikany. Ny Arikanjely arak’izany no lehiben’ny Anjely, Filohan’ny Tafiky ny Lanitra, Mikaela no anarana nomen’I Joda azy (Joda 1:9), izay midika hoe “toa an’Andriamanitra” (Dan 10:13; Dan 12:1; III Jaona 1:9; Ap 12).
Mikaela izay Arikanjely (7). Izy no Filoha na Komadin’ny tafiky ny lanitra. Ny hevitry ny anarany dia hoe:”toa an’Andriamanitra”. Izy no niady tamin’I Satàna (Ap 12:7).
- Gabriela (Dan 8 Dan 9:21; Lk 1:19-26).Ny anarana hoe Gabriela dia “mahery Andriamanitra”. Ny asany dia ny mitondra ny Tenin’Andriamanitra na ny hafatra ho an’ny olona tian’Andriamanitra hiantefan’izany, toa an’I Maria ao amin’ny Lioka 1:28-38.
- Nampahery ihany koa an’I Daniela ny anjely Gabriela, rehefa napahafantatra azy ny fahotan’ny zanak’olombelona (Dan 8:15-19). Niverina indray koa izy niteny sy nampianatra fahendrena, izany hoe ny fahalalàna an’Andriamanitra (Dan 9: 20-23).
II- ASAN’NY ANJELY
Araka ny Hebreo 1:14 dia nirahina izy ireny mba hanao asa fanompoana ho an’izay handova famonjena. Noho izany, ny asan’izy ireny izany dia mitondra hafatra, miaro ny olon’Andriamanitra, mampahery azy ireo, manoro lalana azy amin’ny toetra tokony hananana ary miady amin’ilay ratsy.
Betsaka ny ohatra azo raisina amin’izany/
Manana hery tsy hay tohaina izy ireny (Sal 103:20). Miditra an-tsehatra izy hahatanteraka ny fitsaran’Andriamanitra (Sodoma, Jerosalema, Ny Asyriana, Heroda). Afaka mivezivezy eran’izao tontolo izao izy ireny hanara-maso azy (Zak 8: 1-9).
Manompo an’I Jesosy sy mankalaza Azy ihany koa izy ireo (Mat 4:11; Mat 13:41; Mat 25:31; Mat 26:53; Lk 3:13; Lk 22:43; Heb 1 Ap 23:16).
Mankalaza an’Andriamanitra tsy mitsahatra ihany koa ny anjely (Sal 148:3; Ap 7:11-12).
Ny anjely dia tanteraka amin’ny fankatoavana an’Andriamanitra izany hoe tsy misy tsiny ary tsy misy ota. Na izany aza, zava-boaharin’Andriamanitra ihany izy ireny fa tsy Andriamanitra na mitovy aminy na dia mamirapiratra sy manan-kery aza. Tsy azo atao na oviana na oviana ny miankohoka na mivavaka aminy (Rom 1:24-25; Kol 2:18; Apo 19:10; Ap 22:9).
Maro tsy tambo isaina ny anjely: Daniela sy ny bokin’ny Hebreo dia miteny izany (Dan 7:10; Heb 12;22).
Ny Bokin’ny Apokalipsy koa dia miresaka ny amin’ny anjely alinalina sy arivoarivo nanodidina ny seza fiandrianana (Ap 5;11).
Jesosy koa dia milaza fa afaka miantso anjely legiona roa ambin’ny folo (ny legiona 1 dia misy miaramila 6826).
Nisy kosa anefa anjely niodina sy nikomy tamin’Andriamanitra (Mat 25:41; II Pet 2:4; Jd 1:6; Ap 12;9). Toy izany indrindra, Satana dia anjely ihany koa taloha, ary nanana toeram-boninahitra, saingy naongana sy nazera, noho ny avonavony (Is 14:4-23; Ez 28:11-19).
Ireto no toetra mampiavaka ny anjely amin’ny zava-boahary hafa:
- Mahery sy matanjaka (II Pet 2:11)
- Be voninahitra sy masina (Lio 9:26)
- Tsy mety maty (Lio 20:36)
- Sady tsy lahy no tsy vavy (Mat 22:30)
- Fanahy izay ampiasain’Andriamanitra (Heb 1:14)
- Mifaly ny amin’ny famonjena fanahy (Lio 15:10)
- Afaka mahita ny tavan’Andriamanitra (Mat 18:20) fa isika kosa tsy mahazo mahita izany (Eks 33:20)
Arak’izany, manana anjara toerana lehibe amin’ny fanampiana antsika ny anjely, araka ny sitrapon’Andriamanitra. Tandremo anefa, fa tsy ampiasaina akory izy amin’izay mety ho filantsika manokana, na amin’ny fitiavan-tenantsika, fa mitarika antsika kosa hanao ny sitrapon’Andriamanitra sy hitarika ny lalantsika mankany amin’ny Ray sy ny famonjena. Nomaniny ho antsika mantsy ny fiainana mandrakizay, ary natao mihoatra noho ny anjely isika amin’ny ananganana antsika ho zanak’Andriamanitra, mpandova ny fanjakan’Andriamanitra. Izany no fitiavan’Andriamanitra feno antsika!.
Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿
19 votes. Moyenne 3.26 sur 5.
1. RAMONJARIVOSON 12/04/2012
Tsara, tena tsara ny fampianarana toy itony ka isaorana ny Tompo nanome saina ny mpanompony ka ahafahana mampiely itony amin'ny fomba haingana sy mahomby.
Mirary ny hitohizany.
2. isabel marant amos (site web) 03/07/2012
3. Robson 08/04/2013
bjr! Sady tsy lahy no tsy vavy (Mat 22:30), ahona zan oe sad ts lahy no ts vavy? ts hamoron zv-boary sampona otran'zan mihits Andriamanitra a! de ahona zan lazain'ny Asan’ny Apostoly 1:10. iza lay 2 lahy lazain ao? anjely reo ka, ar resahin mazava eo oe "lahy"
Azo adika hoe “mpitondra hafatra” ny teny hebreo sy grika ilazana ny hoe “anjely.” Fitaovana ifandraisan’Andriamanitra amin’ny olona àry ny anjely.
noho izany ts mis anjely zazakely fa person efa lehibe azon'Andriamanitra hirahina iz ireny